केही आफ्नै कथा, ब्यथा अनि भावनाहरु: विश्वासघात
फोन काटियो तर उनी सँगको यो एकै पटकको संवादले दिपकको मनमा केही अनौठोपनाको महसुस भइ सकेको थियो । डाइरी पल्टाएर बिक्रमदाइको नं हेरे मात्र बिचको एउटा नं हेरफेर भएको रहेछ ।
उसले मन मनै सोच्न थाले, स्वर यति मिठो थियो उनको नाम सम्म सोध्न सकिन । के होला उनको नाम, कहा होला उनको घर, कहा होलिन अहिले उनी, धत्तेरीका त्यती बोली त सकेको थिएँ उनको नाम मात्र सोधेको भए पनि त हुने थियो । फेरी फोन गर्ने मुड बनाइ अपरीचित मैयाको नं हत्तपत्त सेभ गरे ।
भोली पल्ट बेलुकी लगभग उही बेला फेरी पबित्रालाइ त्यही नं बाट फोन आयो ।
हेलो, तपाइ को बोल्नु भएको? तपाइले कस्लाइ खोज्नु भएको?
पहिलो फोन उठाइमा नै एतिका धेरै प्रश्न ओइरीएकाले दिपक एक छिन अलमलमा परेर हेलो भन्नै बिर्सीएर बसे ।
उता बाट फेरी तिखो स्वरमा आएको आवाजले दिपक आतिए
हेलो ए म‌..........म..........म !
मेरो नाम दिपक अँ ...........मैले हिजो पनि फोन गरेको थिए नी ।
अँ.......... मैले हिजो गल्ती नं हानेछु तर.......... तर आज त तपाइ सँगै बोल्नलाइ गरेको ।
ए साँची तपाइको नाम के नी?
ए हो र? हा हा हा नचिनेको मान्छे सँग के बोल्ने नी?
हैन मेरो नाम दिपक मेरो घर रामेछाप भए पनि म काठमाडौंमा काम गर्छु त्यती भए पछि त तपाइले मलाइ चिनी हाल्नु भयो नी हैन र ? कि किन तपाइको नाम भन्न मिल्दैन र मलाइ?
मौका पाउने बित्तिकै दिपकले नौनी लगाइहाले बोलीमा।
हैन नी । अँ.... मेरो नाम पबित्रा।
अहो कति राम्रो नाम । तपाइ त नाम जस्तै पबित्र हुनुहुन्छ होला है? अनि कहा हुनु हुन्छ अहिले? तपाइ के गर्नु हुन्छ?
होइन है त्यती पबित्र त ।आवाजमा अलि मधुरता छायो । अँ मेरो घर इलाम अनि म यहि पढ्दै छु । अनी तपाइ चै के गर्नु हुन्छ नी काठमाडौमा ?
बल्ल खुल्न थालीन् पबित्रा मौका यहि हो दिपकले पनि निकै रमाइला रमाइला गफ गरेर मोहित बनाइ दिए । ठमेलको रात्रि रेष्टुरेण्टमा कार्यरत दिपकले आफु सानो तिनो ब्यापार गरेर गुजारा गरेको बताइ ढाँटे । सुरुमा बोन्सरबाट काम थालेका दिपक अहिले निकै चर्चीत गुण्डाहरुको दाहिने हात भएर काम गर्न थालिसकेको कारण पैसा निकै कमाउने भै सकेकाले पबित्रालाइ दिनै फोन गर्ने र मिठा मिठा गफ गर्ने गर्न थाले। उनिहरु बिचको यो अपरिचित सम्वन्ध बिस्तारै मित्रताको साइनोमा दिन दुइ गुणा रात चौगुणाले झागिंदै गइ रहेको थियो । बिस्तारै फोन मित्र हुदा हुदा उनीहरुको यो रुप प्रेममा परिणत भै सकेको थियो । पहिलो फोन सम्पर्कको करिव ५ महिनामा पबित्राको घरमा दाजुको बिबाह थियो । उनीहरुको मित्रतालाइ अझ प्रगाढ बनाउन उनीहरुको भेट आवश्यक भै सकेका कारण पबित्राले आफ्ना दाइको बिबाहको मौका छोपी दिपकलाइ आफ्नो घर बोलाइन् । दिपक पनि के कम हानिए आफ्नी प्रेमिकालाइ भेट्न उनको घर इलाम। पबित्राले घरमा पनि दिपकलाइ साथी भनी परिचय दिलाइन् ।
इलाम बहुमुखि क्याम्पस वि‌ ए तेश्रो बर्षमा अध्ययनरत भएता पनि पबित्रा साच्चै सोझि थिइन । दिपक एक बिकट गाउको भएता पनि सानै उमेर देखि घरबाट टाढा काठमाडौमा अनेक दुख हन्डर खाइ हुर्कीएका कारण निकै बाठा थिए । उनले वास्तवमा एक कक्षा पनि पढेका थिएनन् तर म वि ए पढेर छोडेको भनि ढाट्न सफल भए । पहिला फोन मै मोहित भै सकेकी पबित्रा दिपक सँगको भेटले निकै हर्षीत थिइन । हेर्दा कालो बर्णको भए पनि हट्टा कट्टा खाइलाग्दो अग्लो शरीरले उनीलाइ निकै आकर्षीत गरेको थियो ।
दाइको बिबाहमा गएका दिपक झण्डै आठौ दिन पछि काठमाण्डौ फर्कने तयारीमा थिए तर ऊ एक्लै नभै सँगै पबित्रालाइ पनि साथमा ल्याउदै थिए । यसको जानकारी न त केटा पक्षको परिवारलाइ थाहा थियो नत केटी पक्षका परिवारलाइ नै । थाहा थियो त सिर्फ एक जना गोपाल र उनीहरु दुइ जनालाइ । गोपाल दिपकका साख्खै दाजु नभए तापनि काकाका छोरा दाजु थिए तर आफ्ना दाइहरु सँग भन्दा धेरै मिल्ने । दाइको नाताले उनलाइ पनि खासै बिस्तृत जानकारी दिएनन् मात्र अब तिम्री बुहारी लिएर आउदै छु है भन्ने जानकारी दिएका थिए । भाइलाइ तिम्रो बारेमा उनीहरुलाइ के थाहा छ भनी गोपालले सोधेको प्रश्नको प्रती उत्तरमा मात्र हासे । पछि आफु पनि फस्न सक्ने संभावना देखि गोपालले सम्झाउने कोसीस पनि गरे । तर दिपकले आफ्ना दाइलाइ त्यसको चिन्तै नगर्नु सल्लाह दिए ।
सामान्य परिवारकी पबित्रा दिपकको चुरीफुरी र हाइफाइ देखेर मख्ख थिइन । उनिहरु दाइको बिवाहको आठौ दिनमा घर परिवार तथा साथी भाइलाइ थाहै नदिइ चल्दै गरेको बि ए को परिक्षा छोडेर सुइकुच्चा ठोके । काठमाण्डौ आएको करिब एक महिना पछि बिभिन्न कारणबाट साथीहरु सँग झगडा पर्यो । त्यस पछि मात्र पबित्राले उनी अनपढ रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाइन् तर काठमाडौको रमझम, सुख सयल र मोजमस्तीको दुनीयामा रम्न थाली सकेकी उनलाइ त्यसकुराले खासै असर पारेन। त्यस पश्चात उनीहरु नेपालको सुन्दर नगरी पोखरा तिर हानीए । बोन्सर हुदा कमाएको पैसाले साथी सँग मिलेर पोखरा मै एउटा रेष्टुरेण्ट खोल्न पुगे । उनीहरुको हाइफाइलाइ मेन्टेन गर्न रेष्टुरेण्टको कमाइले मात्र पोखरा जस्तो ठाउमा असंभव थियो । तर दिपकको पोखरामा पनि उस्तै खाले केही माफिया साथीहरु सँग सँगत भएको कारण पुरानै अनैतिक कार्य गर्न सजिलो भयो । महिनाको पचासौ हजार कमाउने तथा कमाइएका पैसा मोजमस्ती मै उडाउथें।
घरबाट भागेर आएका उनीहरुको बिबाह करिव एक बर्ष पछि गरि दिन परिवारबाट बोलावट आयो । पोखरा मै बस्दै आएका उनिहरु घर परिवारको कोही सदस्य बिना जाने निधो गरेतापनि माइती पक्षकाले एक जना मात्र भए पनि लिएर आउने हुकुम दिए पछि गोपाललाइ लैजाने भए । मगर समुदायमा हुर्केका दिपक अन्यजातिको रीति रिवाजका बारेमा केही थाहा थिएन । पाँच दाजुभाइ सहितको राइ परिवारकी एक्लि चेली पबित्राको अन्तरजातीय बिबाह नै भएतापनि धुमधाम सँग गरि दिन लागेका थिए । तर टाढाबाट जानु पर्ने भएकाले सबै समानको जोहो माइती पक्षबाटै गराइएको थियो । यहाबाट बेहुला बेहुली र एक दाजु सहित तीन जना बिवाहमा जादै थिए । इलाम पुगेर केटीका पहिलाका साथीहरुलाइ खवर गरी करिव १५ जना जतिको जन्तबनाइ बिवाह भोजमा सरिक भए ।
बिबाह सकिएको तेश्रो दिन पबित्रालाइ गतबर्ष छुटेको परिक्षा दिन माइती मै छाडेर दुइ दाजु भाइ काठमाडौ फिर्ता भए । बिवाह भोज सम्पन्न भएको २७ दिन पनि नकटी अबैध काम गरेको आरोपमा दिपक प्रहरीको पक्राउमा पर्न पुगे । बिविध आपराधिक गिरोहमा लागेको र एक जना साथीको हत्याको आरोपमा रिवलवर सहित मध्यरातमा आफ्नै कोठाबाट दिपक समातिए । समातिएको भोली पल्ट फोन आयो पबित्रालाइ पतिदेब समातीएको खवर सहीत । दिपक गलत कामको सजाय स्वरुप जेलको चिसो छिडीमा दिन बिताइ रहेका छन । पबित्राभने ६ महिनाको दिपकको मायाको चिनो पेटमा हुर्काउदै अर्धचेतन अबस्थामा दिपकको पर्खाइमा दिन गन्दै एक्लो जिवन बिताउन बाध्य छिन ।
Posted by मनु ठाडा मगर (MANU) at 4:09 AM
हाम्रो समाजको एउटा कटु यथार्थको सटीक प्रस्तुति! कति पवित्राहरु यसैगरी धोका खाईरहेका छन्।
मनु जि,यो एउटा पवित्रको मात्र ब्यथा हैन ।यस्त हजारौ पवित्रहरु छन जो केटा मान्छेको वास्तबिक्त जन्न, बुझ्न र पहिचन गर्न नसकि उसको देखावटि जिवनको रमझम र देखा सिखिमा फसेर आफ्नो जीवनलाई दुखको ढोका सम्मा धकधक्याउने र पछि यतर्थको भुमरिमा परे पछि पछुताएर जिवन बिताउने, यो नै हाम्रो चेलिबेटि हरुको अभिसप कयम छ। जे होसतपाईंको यो लेखले कसैलाई शिक्षाको मार्गदर्शन मिल्नेछ भन्नेमा म पुरा बिश्वास गर्दछु ।
Thankyou sathi haru sabai janalai